बन्दाकोपीको अभाव भएपछि दक्षिण कोरियामा किम्ची बनाउन समस्या:: Naya Nepal
बन्दाकोपीको अभाव भएपछि दक्षिण कोरियामा किम्ची बनाउन समस्या
दक्षिण कोरियामा बन्दाकोपीको अभाव भएपछि त्यहाँको प्रमुख खानेकुरा किम्ची पाउन मुश्किल पर्न थालेको छ । अगस्ट र सेप्टेम्बर महिनामा कोरियाली प्रायद्वीपमा आँधीतुफान, बाढी र पहिरो आएकाले बन्दाकोपीहरू नष्ट भएका थिए । त्यसपछि बन्दाकोपीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ ।यसले गर्दा दक्षिण कोरियालीहरूले किम्चीको तिक्खर अचार खान पाएका छैनन् । त्यहाँका सबै भोजनमा किम्ची अनिवार्य हुन्छ । बर्गरको बीचमा अनि पिज्जाको माथि पनि किम्ची राखेर खाने गरिएको छ र संसारभरि यो प्रसिद्ध छ ।बन्दाको अभाव भएपछि मूल्य ६० प्रतिशतसम्म बढेको छ । अझ किम्ची बनाउने मौसम शुरू हुनै लाग्दा यस्तो अभाव देखिएको हो । दक्षिण कोरियालीहरू बन्दाकोपीमा खुर्सानीको धूलो, लसुन र अन्य मसला राखेर किम्चीको अचार खाँद्छन् । किम्ची बनाउने कामलाई किमजाङ भनिन्छ र सन् २०१३ मा यूनेस्कोले यसलाई सांस्कृतिक सूचीमा राखेको थियो ।
सदर चिडियाखानालाई ललितपुर महानगरले दियाे १० लाख
सदर चिडियाखानालाई ललितपुर महानगरपालिकाले १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। महानगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले आज एक कार्यक्रमबीच चिडियाखाना प्रमुख चिरञ्जिवी पोखरेललाई चेक हस्तान्तरण गरेका हुन्। कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि चिडियाखाना बन्द अवस्थामा छ। आम्दानीको मुख्य श्रोत टिकट काउन्टर बन्द भइ आर्थिक समस्या परेको थाहा पाएपछि महानगरले रकम सहयोग गरेको मेयर महर्जनले बताए। ‘धेरै कर्मचारी तलब बिना काम गरिरहनु भएको थाहा पाए। यतिबेला १ हजार बन्यजन्तु पाल्न चिडियाघरलाई गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘चिडियाघर महानगरको धरोहर हो। समस्या परेको बेला सहयोग गरेका हौं।’अन्य संघसंस्थाले पनि परेका बेला सहयोग गर्नुपर्ने मेयर महर्जनले बताए। साथै भोलिका दिनमा थप सहयोग गर्नुपरे महानगर तयार रहेको उनले विश्वास व्यक्त गरे।‘आवश्यक पर्दा भोलिका दिनमा पनि महानगरले सहयोग गर्नेछ। समस्या परेको जानकारी हुनुपर्यो,’ उनले भने। कार्यक्रमको अवसरमा मेयर महर्जनले महानगरवासीलाई विजयादशमी तथा नेपाल सम्वतको शुभकामना व्यक्त गरे।
कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवारपूर्ण रवैया – डा. महत
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको कोभिड १९ अनुगमन समितिले कोभिड १९ को परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने सरकारको निर्णयलाई गैर-जिम्मेवारीपूर्ण भन्दै विरोध गरेको छ ।महामन्त्री तथा संयोजक डा. प्रकाशशरण महतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा पूर्णतः असफल भएको निष्कर्षसमेत निकालेको हो ।डा. महतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोरोनाको बढ्दै गएको आँकडाले नेपालमा स्थिति भयावह हुँदै गएको संकेत गर्दछ । तर सरकार देशमा कोभिड—१९ संक्रमण रोक्न सफल भएको दावी गर्दैछ । सरकारको यो भन्दा विरोधाभाष र गैर जिम्मेवारीपूर्ण रवैयाको अर्को नमूना हुन सक्दैन ।’डा. महतले विज्ञप्तिमार्फत संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत तथा नेपाली कांग्रेस पार्टी र नागरिक समाजबाट भएको निरन्तर विरोधका वावजुद सरकार कोभिड—१९ संक्रमितको निःशुल्क उपचार गराउनु पर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आरोप लगाए ।’त्यसमाथि सरकारी अस्पतालहरुले समेत उपचार पहिले नै निश्चित धरौटी रकम दाखिला गर्नु पर्ने सूचना जारी गर्दैछन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसले गर्दा खर्च जुटाउन नसकेर कतिपय विरामीहरु अस्पतालमा उपचार गराउँदा गराउँदै फिर्ता हुदैछन् भने कतिपय संक्रमणले गम्भीर हुँदा समेत घरमै बस्नु पर्ने वाध्यता भएको छ ।’उनले सत्ताधारी दलका नेता र उनका नाममा दर्ता भएका गैर सरकारी संघ–संस्थाहरुलाई अरबौं रकम दिन सक्ने, विभिन्न शीर्षकमा फजुल खर्च गर्न समस्या नहुने, कोभिड—१९ संक्रमण रोक्ने नाममा ठूलो मात्रामा दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गर्न सरकारसँग पर्याप्त बजेट हुने तर आम नागरिकहरुले परिक्षण र उपचार खर्च नभएर मृत्युवरण गर्नु पर्ने र वेरोजगारीका कारण चाडवाडको बेलामा पनि भोकभोकै बस्नुपर्ने स्थितिमा बजेटको अभाव देखाउँदै सरकार केही गर्न नसक्ने भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आरोप लगाए ।विज्ञप्तिमार्फत डा. महतले कोरोना रोकथाममा सरकारले देखाएको उदासिनताका कारण बढ्दो संक्रमणलाई कम गर्न आम नागरिकहरुको तहबाट पनि जिम्मेवारी लिन जरुरी भएको बताए ।’मास्क लगाउने, भौतिक दुरी कायम राख्ने र सावुन पानीले नियमित हाँत धुने उपायहरुलाई गम्भीरताका साथ लिन पनि हामी सबैसँग आग्रह गर्दछौं,’ उनले भनेका छन्, ‘अन्तमा, कोभिड—१९ संक्रमणको विशिष्ट परिस्थितिमा बडा दशैको चाडलाई आ–आफ्ना घरमा मात्र मनाएर संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न समेत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ ।’
घरै अगाडिको फाँटमा लहलह झुलेका मनमोहन धानका बाला । हरेकका घर करेसामा ढकमक्क फुल्दै गरेका मखमली र सयपत्री । आहा कति उत्साह बोकेर आउँथे चाडपर्व । यसपालि पनि मौसम उस्तै छ । धान झुलेका छन्, सयपत्री फुलेका छन् । तर चाडपर्व आएको खुशीमा मन भने फुलेको छैन ।
ज्यान परदेशमा छ । मन गाउँमा । त्यसैले पनि होला यो मनमा आफन्तको अभाव महसुस हुँदो रहेछ । एकातिर महिनौंदेखिको कोरोना कहर ।अर्कोतिर दैलो टेकिसकेको महान चाड दशैँ , तिहार र छठ । हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि हामी परदेशीलाई भावुक र नरमाइलो बनाउन चाडपर्व आईसकेछ ।कहिलेकाहीँ त आफ्नो संस्कृति, रीतिरिवाज भन्दा धेरै पर यो बिरानो शहरमा यस्ता चाडपर्वहरु किन आउँदा होलान् जस्तो लाग्छ । गएको वर्ष त घरैमा थिएँ । सबै जनासँग दशैँ अनि तिहार मनाउन पाउँदाको त्यो क्षण अहिले कल्पना मात्रै गर्दा पनि मन फुरुङ्ग हुन्छ । तर यतिबेला म परदेशमा छु । परदेशमा चाडबाड आउँदा मन गह्रौँ हुन्छ । भित्रभित्रै पोलेको छ ।बिरानो देश अझै बिरानो भएको छ । तर पनि अर्को वर्ष घरमा चाडबाड मनाउन पाइन्छ भन्ने झिनो आशा लिएर बस्न बाध्य छु । लामो समयपछि पोहोर साल टीका लगाउन पाउँदा म कति खुसी भएको थिएँ । आमाको हातको टीका, बहिनीको माया भरिएको मखमली र सयपत्री फूलको माला । दशैँको रौनक, तिहारको झिलिमिली, देउसी र भैलो, आज उही पल झलझली सम्झेको छु ।एकातिर महिनौंदेखिको कोरोना कहर ।अर्कोतिर दैलो टेकिसकेको महान चाड दशैँ , तिहार र छठ । हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि हामी परदेशीलाई भावुक र नरमाइलो बनाउन चाडपर्व आईसकेछ ।दशैँमा कुन कपडा किन्ने र लगाउने भन्दै म र मेरो जीवन संगिनी नजिकैको पसलमा लत्ताकपडा रोज्न हिँडेको । त्यो रातो सर्ट ,खैरो रंगको पाइन्ट र कालो जुत्ताले मलाई अहिले पनि तेही दशैँको झल्को दिइरहेको छ ।यसपालि भने कस्तो कपडा किन्ने, कसरी घर सजाउने भन्ने कुराको मलाई कुनै झण्झट छैन । परदेशमा छ । कुन दशैँ कुन तिहार, दशैँको दिन पनि काममा जानुपर्ने छ । अर्काको नुन खाएपछि नुनको सोझो गर्नैपर्छ । म यस्तो बाध्यतामा छु – न घरदेश फर्कन सक्छु, न त यतै भएका आफन्तहरुसँग मिलेर दशैँ नै मनाउन सक्छु ।बाबा र भाइ पनि एउटै देशमा हुँदाहुँदै पनि एक अर्कासँगै भएर दशैँ मनाउन सक्ने अवस्था समेत छैन । यो कोरोनाको महामारीले गर्दा सबै जनालाई समस्यामा पारेको छ । हरेक वर्ष घरैमा बसी बुबाआमा लगायत मान्यजनहरुको हातबाट टीका र जमराको साथमा आशीर्वाद लिने मन त नभएको कहाँ हो र ? बाध्यता र विवशताले गर्दा परदेशीन बाध्य म जस्ता लाखौँ नेपालीको समस्या यस्तै छ । घरपरिवारको खुशी र उज्ज्वल भविष्य निर्माणका खातिर आफूलाई यो अरबमा समर्पण गर्नु सिवाय मसँग अरु केही उपाय नै रहेन ।कम्पनीसँग हारगुहार गरी एक महिनाको छुट्टी लिएर जाउ भने पनि कोरोनाले गर्दा टिकट पाउन मुस्किल छ । टिकट पाए पनि घरमा जानासाथ परिवारसँग मिलन असम्भव छ । क्वरेण्टीन र आइसोलेसन गर्दागर्दै भएको बिदा पनि सकिने अवस्था हुन्छ ।फेरि फर्किएर आउन पाइने हो कि होइन ? अवस्था के कस्तो हुने हो कस्लाई के पो थाहा छ र ? हुँदाखाँदाको जागिर छोडेर गयो अनि आउन नपाउँदा जागिर पनि धरापमा अनि उतै बसौं केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । समस्या माथि समस्या । यस्तै यस्तै कुरा सोच्छु अनि भो अहिले जाँदिन बरु अर्को वर्ष जान्छु र मज्जाले घरपरिवारसँग बसेर दशैँ, तिहार अनि छठ मनाएर फर्कन्छु भनेर मन बुझाएको छु।अवस्था सामान्य हुन्थ्यो त एक दिनको बिदा मागेरै भए पनि यतै साथीभाइ अनि आफन्तजनहरु मिलेर दशैँ मनाइन्थ्यो । तर कोरोनाले गर्दा कसैलाई भेट्न सक्ने अवस्था पनि छैन् । फेरि आफूले कर्म गर्ने देशको नियम नै कडा छ । जसरी पनि पालना गर्नुपर्छ ।जुन हाम्रो दायित्व पनि हो । देशभित्रै उचित रोजगारीको अवसर अनि व्यवस्थित नीति नियमहरु नहुँदा म जस्ता लाखौँ युवाहरु भावी सन्तती र परिवारको लागि देश छोडेर परदेशको रापमा सेकिन बाध्य छन् । न त बिरामी हुँदा तातोपानी सोध्ने कोही हुन्छ न त कुनै दिन अलिक थाकेको छु र सक्दिनँ जागिरमा जान्नभन्दा सुनिदिने कोही हुन्छ ।अहिले यस्तै भए पनि अर्को वर्षसँगै बसेर दशैँ मनाउँला नि भन्ने आशा पालेर बस्नु । भाग्यले किनारा लगाएनछ भने पक्कै फर्कनेछु ।यहाँ त हामी मानिसभन्दा पनि मेसिन बनेका छौं । पैसासँग आफूलाई सम्झौता गरिसकेपछि यस्तै हुँदो रहेछ । कर्मभूमिमा मनाइने विभिन्न पर्वहरुमा बिदा हुने भए पनि हाम्रा पर्वहरुमा भने कहिल्यै बिदा भएन । यसपालिको दशैँ दिनभरी ड्युटी गर्‍यो । राती कोठामा गयो । सामाजिक सञ्जालमा अरुका निधारैभरी टीका लगाएका फोटा हेर्‍यो बस्यो ।अघिल्लो वर्ष मैले पनि यसैगरी फोटाहरु पोस्ट्याएको थिएँ नि । त अब फेरि अर्को वर्ष पक्कै पालो आउनेछ भन्दै मनलाई सम्झाएको छु । न श्रीमान् न छोराहरू कोही भएनन् यसपाला भनेर पिर नगर्नुहोला प्यारी आमा अनि दुःखी नहुनु मेरी प्यारी श्रीमती । सोचेझैं जिन्दगी रहेनछ ।अहिले यस्तै भए पनि अर्को वर्षसँगै बसेर दशैँ मनाउँला नि भन्ने आशा पालेर बस्नु । भाग्यले किनारा लगाएनछ भने पक्कै फर्कनेछु । कानमै गुन्जन्छ तिमीले एक वर्ष त भयो गएको दशैँमा बिदा लिएर आउनुहुन्छ होला नि भनेको आवाज ।माफ गर प्यारी हामीले चाहे जस्तो भएन, यसपालि दशैँमा म घर आउन पाइनँ र निभाउन सकिन तिमीसँग गरेको फर्कने बाचा । पिर नगर्नुस् म छिट्टै आउनेछु । एक अञ्जुली खुसी बोकेर म छिट्टै फर्कनेछु ।
वास्तविक जिवनमा आमा बन्दै रक्षा श्रेष्ठ, को हुन् उनका श्रीमान्
चुनावमा अकल्पनिय झड्का लागेपछि ट्रम्पलाई के भयो ?
चिनियाँ नाकाको अवरोध नहटे आन्दोलन गर्छौं : व्यवसायी
विराटनगरको नोबेल अस्पतालमा दुई जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु